Ungaboleka nini futhi usebenzise isithombe ku-inthanethi? | Martech Zone
NgoMgqibelo, ngoMashi 10, 2018 ISonto, Ephreli 1, 2018 Douglas Karr
Ibhizinisi engisebenza nalo lisanda kufaka isibuyekezo kuTwitter esinekhathuni elihlekisayo elalinezimpawu zazo. Ngamangala ngoba bengingacabangi ukuthi baqashe umdwebi wekhathuni. Ngakho-ke, ngibathumele inothi futhi bamangala… bebeqashe inkampani yezokuxhumana ukuze bazibandakanye futhi bakhulise abalandeli babo futhi bazoyithumela.
Ngemuva kwengxoxo nenkampani, bathuke nakakhulu ukuthola ukuthi zonke izithombe, yonke imeme, nayo yonke ikhathuni eyabiwayo yenziwa kanjalo ngaphandle kwemvume yenkampani. Baxoshe inkampani babuyele emuva basusa zonke izithombe okwabelwana ngazo online.
Lokhu akuvamile. Ngikubona ngokuqhubekayo lokhu kaninginingi. Elinye lamakhasimende ami laze lasongelwa ngecala ngemuva kokusebenzisa isithombe injini yokusesha esithe sikhululekile ukusisebenzisa empeleni sasingekho. Kwakudingeka bakhokhe izinkulungwane eziningana zamaRandi ukuze inkinga iphele.
Amabhizinisi anecala elikhulu lokuguqula izithombe ezebiwe ukuze zikhangiswe, ama-blogger angama-49% nabasebenzisi bezinkundla zokuxhumana beba izithombe, kanye namabhizinisi angama-28%
Nakhu ukuhlukunyezwa kwakamuva okwenziwe yinkampani ebisebenzise isithombe sami istudiyo se-podcast, kodwa banameka uphawu lwabo siqu kuso:
Ngokunikwa utshalomali engilwenzile kokubili estudiyo kanye nasekuthwebuleni izithombe, kuyahlekisa ukuthi othile angavele ayibambe aphonse uphawu lwayo kuyo. Ngithumele izaziso kuzo zonke izinhlangano.
Ukuze sibe nokuthula kwengqondo, sihlala senza okunye kokulandelayo ngesiza sethu namakhasimende ethu:
I qasha abathwebuli zithombe futhi ngiqinisekise ukuthi ibhizinisi lami linamalungelo agcwele okusebenzisa nokusabalalisa izithombe engiziqashile ukuthi ngizithathe ngaphandle kwemingcele. Lokho kusho ukuthi ngingawasebenzisela amasayithi ami, amasayithi amaklayenti amaningi, izinto zokuphrinta, noma ngisho nokunikeza iklayenti ukuthi lisetshenziswe noma ngabe bathanda ini. Ukuqasha umthwebuli wezithombe akuyona nje inzuzo yokuthola amalayisense, futhi kunomthelela omangalisayo esizeni. Akukho lutho olufana nesayithi lendawo elinezimpawu zendawo noma abasebenzi babo ezithombeni zabo eziku-inthanethi. Yenza ngezifiso amasayithi futhi ingeza izinga elihle lokuzibandakanya.
I qinisekisa amalayisense esithombe ngasinye sisebenzisa noma sisabalalisa. Ngisho nasesizeni sethu, ngiyaqinisekisa ukuthi kukhona umzila wephepha wesithombe ngasinye. Lokho akusho ukuthi sikhokhela zonke izithombe, noma kunjalo. Isibonelo i-infographic engezansi - isetshenziswe ngemvume njengoba kuchaziwe kokuthunyelwe kwangempela ngu Hlanganisa.
IBerify ukusesha kwesithombe okuphindayo ukukusiza uthole izithombe namavidiyo entshontshiwe. Bane-algorithm yesithombe ehambisanayo futhi bangasesha izithombe ezingaphezu kwezigidi ezingama-800 kanye nedatha yesithombe kuzo zonke izinjini zokusesha ezinkulu.
Uma kukhulunywa ngokuthwebula izithombe nezithombe ezebiwe, abasebenzisi be-inthanethi - abenza ukweba kuqhubeke - bakhetha ukukucabanga njengobugebengu obungenazisulu abangadingi ukuxoliswa ngabo. Kodwa-ke, abathwebuli bezithombe abangochwepheshe nabasebenza ngokuzilibazisa bayalazi iqiniso - ngaphandle kokuthi akulungile, ukwebiwa kwezithombe akukho emthethweni futhi kuyabiza. Hlanganisa
Nayi i-infographic ephelele, Isifinyezo Sokuntshontshwa Kwezithombe Ku-Inthanethi. Ichaza inkinga, ukuthi amalungelo nokusetshenziswa okulungile kusebenza kanjani (okuyizinkampani eziningi kakhulu ezihlukumeza), nokuthi yini okufanele uyenze uma uthola isithombe sakho sebiwe.
Tags: qondacopyrightukwebiwa kwezithombeukusetshenziswa kwesithombeukusetshenziswa kwesithombeinfographicukweba izithombeokuqukethwe kwebiwe
I-El Toro: I-IP-Target Target, I-Cookieless Geographic Advertising